About Us - I-Dezhou Grand Luminous Technology Co, Ltd.
IGreat Luminous eyasungulwa ngonyaka ka-2005, Ngokuncika kusizinda esinamandla sobuchwepheshe be-photoluminescence beChinese Academy of Science, sithole ukumiswa okuphelele nokunembile ngeCAS (Dezhou) Innovation Park kanye neShandong University. Sigxila kubuchwepheshe obude be-after-glow photoluminescence and Equipment 'Research & Development, ukukhiqiza nokuthengisa.
Njengamanje, ukukhanya kwe-luminescent powder yethu ye-luminescent powder, ikakhulukazi i-luminescent powder eluhlaza ophuzi nohlaza okwesibhakabhaka, Ukuba ngumkhiqizo wethu oyinhloko kanye nemikhiqizo yokuncintisana kakhulu, kube sezingeni eliphambili emkhakheni wezinto ze-luminescent eChina. I-glow yethu powder ifakwa ngokushesha, isikhathi eside se-luminescent nokukhanya okuqinile kwe-luminescent. Futhi ebangeni elilinganayo lezinhlayiya, ubukhulu obukhanyayo buhamba phambili. Futhi isilinganiso sokusebenza kwezindleko siphakeme kakhulu eChina.
Izinto zethu zokwakha azivele zikhanye
Uyini umthetho wethu we-FBA?
Okokusebenza kwethu okukhanyayo, Isici siyazikhanyisa ebumnyameni Kusebenza kwethu okukhanyayo kwezinto zethu, umsebenzi omude we-afterglow spontaneous, kanye nezici zokuphuma kokukhanya okuqhubekayo ngemuva kokususwa komthombo wokukhanya
Kusho ukuthi lapho i-powder yethu ekhanyayo ifakwa emkhiqizweni womkhiqizo noma imikhiqizo yethu ekhanyayo esekuqediwe esetshenziswa, okuveziwe komkhiqizo namaphuzu okuthengisa kuyangezwa.
I-1, imvelo yethu ethuthukisiwe ukusebenza kwezindleko eziphakeme, ukusebenza kwezindleko eziphakeme ngokwayo kusindisa imali.
2. Ngaphezu kwalokho, ukukhanya kwe-luminescent kwezinto zethu ze-luminescent (noma imikhiqizo ye-luminescent) kungcono, inani lokungezwa (noma ukusetshenziswa) liyancishiswa, futhi izindleko zizonke ziyancishiswa.
3. Ukuhambisana okuhle. I-masterbatch yethu ekhanyayo inokuhambisana okuhle futhi inciphisa inani lokulahlwa kukadoti. Iphaneli yethu ye-luminescent yefilimu ye-luminescent isondele kakhulu ekusebenziseni komsebenzisi wokuphela, enziwe ngokwezifiso.
4, Kulula ukuyisebenzisa futhi inikeze amakhasimende isixazululo esihle kakhulu.
Ngomthamo okhulayo womkhiqizo kanye nokuvuthwa okuqhubekayo kocwaningo nokukhula kobuchwepheshe be-photoluminescence, sihlangabezane nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende emazweni amaningi emazweni we-photoluminescent pigions nemikhiqizo ye-photoluminescent. Sizibophezele ukuhlinzeka abathengi ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezifanele futhi ezifanele ze-luminescent, ngokuguga okudala okukhanyayo, ukugqama okuqinile, izinhlelo zokusebenza ezihambelana ngokwengeziwe, nokunikeza izixazululo zohlelo zamaphrojekthi we-luminescent wamakhasimende.
Umgomo wethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo ebiza kakhulu nezixazululo
Sibambe okuthembekile, okumi ndawonye, ​​okusebenzayo, okusha "njengomqondo wethu wokuphatha, silandela izidingo ze-International Standard Organisation, ukuphathwa okuqinile, ikhwalithi yokulawula ngokuqinile, sinikezela ngemikhiqizo yeklasi lokuqala kanye nensizakalo enhle kakhulu kuwo wonke amakhasimende ethu